Inona no azoko atao mba hahatonga ny sariohatra fikarohana tsaratsara kokoa?
Ny laharana ambony amin'ny milina fikarohana dia tanjona voalohany amin'ny tompon'ny tranonkala rehetra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara toro-hevitra mahasoa aho hanampy amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana organika nefa tsy manapaka ny banky. Noho izany, andeha isika hanomboka.
Mifantoka amin'ny fanatontosana ny tranokalanao Attractive
Tsy mahagaga raha manana toerana lehibe kokoa ny tranonkala iray manana tanjona tsara kokoa raha te hahita loka kokoa kokoa noho ny iray ratsy endrika. Ny tranonkala fijery manintona dia tsy midika fotsiny hoe mankany amin'ny lozam-pifaneraserana manatsara ny fikarohana, fa koa manatsara ny fifandraisana amin'ny mpampiasa amin'ny loharano - web and mobile. Ity lafiny iray ity dia tena manan-danja tokoa amin'ny fivarotana e-varotra. Tadidio fa misy ny vintana ambany ho an'ny mpitsidika dia handoa ny volany amin'ny tranokala manjavozavo.
Google dia tia ny fahantrana
Ny zava-misy dia ny tsy fanaovana ny tranonkala manintona dia tsy ampy. Ilainao koa ny fanavaozana ny loharanao matetika. Midika izany fa mamorona lahatsoratra vaovao, lahatsoratra bilaogy, fandalinana tranga sy taratasy fotsy farafahakeliny araka izay tratra. Raha tsy izany dia hitsahatra hitsidika ny tranokalanao ny mpitsikilo amin'ny Internet, raha heverinao fa tsy ilaina intsony.
Ny fampivoarana ny votoaty dia tena zava-dehibe izay mitarika ho amin'ny fikarohana tsaratsara kokoa. Ataovy azo antoka fa mahazatra ny faharetan'ny fanavaozana. Ny tsara indrindra, ny fampivoarana isaky ny isan'andro dia tsy maintsy ilaina mba hanatsarana ny lozam-pifidianana. Amin'ny famokarana votoaty sarobidy eo amin'ny fiainana andavanandro, dia hampatanjaka ny fiantraikan'ny SEO ny fepetra raisinao.
Backlinks High-Quality dia tenifototra
Ny marina dia tsy ampy ny taranaka ao anatin'izany - mila mahafantatra ny mpampiasa ao amin'ny tranonkala fa misy tranokala lehibe mamorona votoaty mahafinaritra. Hizara rohy amin'ny tranokalanao araka izay tratra. Ireo rindran-damina ireo dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fanatsarana ny fizotry ny fikarohana. Aza avela mifandray amin'ny spam ny tranonkala - Afaka mamantatra haingana ny fifamoivoizana amin'ny spam ny web crawlers. Tadidio fa ny teknikan'ny 'mainty hoditra SEO' amin'ny tranga faran'izay tratra dia mety hitarika amin'ny fanakanana ny tranonkala.
Ny kalitaon'ny tranonkala izay nametrahana ny rindran-damina dia zava-dehibe ihany koa. Ohatra, ny birao iray avy amin'ny blaogy malaza manana fahefana ambony dia hanana lanjany bebe kokoa noho ny vondrona Instagram iray mahazatra. Noho izany, raha tokony hikorontana ianao, dia miezaha hifandray amin'ny tranokala azo antoka ary ny votoatinao asongadina ao.
Ampiasao amin'ny Video Marketing
Ankoatra ny votoaty sy sary vaovao, Google dia manome loha laharana ny votoatin'ny video. Ny fampiasana horonantsary hampandrosoana ny tranokalanao dia fanapahan-kevitra lehibe foana. Ny dokam-barotra amin'ny video dia manome fahafahana miditra amin'ireo loharanom-pifandraisana goavana toy ny YouTube sy Vimeo. Angamba, io no iray amin'ireo fomba tena sarotra indrindra hahazoana ny teny momba ny marikao.
Ny fampidirana ireo horonantsary YouTube dia afaka manampy amin'ny fitomboan'ny tranonkalanao. Ataovy azo antoka fa mahaliana sy mahasoa ireo mpijery ny lahatsoratranao. Mifantoha amin'ny famoahana lahatsary avo lenta izay mifandraika amin'ny raharaham-barotrao. Ho avy lavitra ny fanatsarana ny fikarohana nataonao motera.
Ireto ny sasany amin'ireo dingana fototra azonao atao mba hampakarana ny tohatra ohabolana. Azo antoka fa misy fepetra maro hafa tokony horaisina mba hahazoana antoka ny fisavana avo lenta. Ireo no fepetra fototra izay ilaina mba hanatanterahana izany.